आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (४ साउन २०७८ सोमबार, १९ जुलाई २०२१) « Nepali Digital Newspaper
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (४ साउन २०७८ सोमबार, १९ जुलाई २०२१)
४ श्रावण २०७८, सोमबार ००:२४
श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ राक्षस नामक सम्वत्सर वर्षा ऋतु वि.सं. २०७८ श्रावण ४ गते तद्अनुसार सन् २०२१ जुलाई १९ तारिख सोमबार आषाढ शुक्लपक्ष दशमी तिथि विशाखा नक्षत्र शुभ योग तैतिल करण ७ः५७ पर वणिकरण आनन्दादिमा मित्रयोग चन्द्रमा तुला राशिमा १५ः११ बजेसम्म त्यसपछि वृश्चिक राशिमा भ्रमणशील रहनेछ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ५ः२१ मा र सूर्यास्त साँझ १८ः५८ बजे हुनेछ ।
मेष – सुख समृद्धि बढ्नेछ । नयाँ काम आरम्भ गर्न समय उपयुक्त छ । आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । आँट उत्साह थपिनेछ । बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, साहित्य, संगीत आदिसित सम्बन्धित काममा सफलता मिल्नेछ । असल भावनाले युक्त कार्य शुभ र सफलतादायक रहनेछ । इष्टमित्र र सन्तानको सुख बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । मान पुरस्कार मिल्नेछ । साझेदारीको काम बन्नेछ । ख्याति फैलिनेछ ।
बृष – शुभ समय छ । मनोकुलको काम बन्नेछ । आफन्तको सहयोग पाउनुहुनेछ । समस्याको समाधान मिल्नेछ । रोकिएको काम बन्ला । मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । सुखशान्ति समृद्धि प्राप्त हुनेछ ।
मिथुन – मध्यम समय छ । व्यस्तता बढ्नेछ । खेलकुद र भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । पढाइलेखाइमा रुचि बढाउनु पर्ला । आकस्मिकता रहनेछ । परिश्रमले सफलता पाउनुहुनेछ । जोखिममा नपर्नु उचित होला । विलासप्रति रुचि बढ्नेछ ।
कर्कट – मिठो भोजन प्राप्त हुनेछ । प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्रको साथ प्राप्त हुनेछ र सन्तान सुख मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । सुख सुविधाको वस्तु बढ्नेछ । सभा–समारोहमा मान पुरस्कार मिल्नेछ । गौरव बढ्ला । रोकिएको काम बन्नुको साथै लगानी लगाइएको धन उठ्ला । धन सम्पत्ति बढ्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । जीवनसाथीको साथ मिल्नेछ ।
सिंह – सुख शान्ति र समृद्धि बढ्नेछ । आरोग्यता बढ्नुको साथै आँट उत्साह पनि बढ्नेछ । बौद्धिक रचनात्मक कलात्मक आदि कार्यमा सफलता मिल्नेछ । यात्रापरक र लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित काममा पनि सफलता मिल्ला । साहसिकताको क्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । उन्नति पदोन्नति हुनेछ । ऋण रोग र शत्रुमाथि विजय प्राप्त होला ।
कन्या – शुभ र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । प्रेममा रुचि बढ्ला । यात्रामा सफलता प्राप्त होला । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्नेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ । खेलकूद भ्रमणमा आकर्षण बढ्नेछ । वार्तामा सफलता मिल्नेछ । सुख सम्पतिमा बढोत्तरी हुनेछ । मान महत्व बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । आमोदप्रमोदमा रमीरहनु हुनेछ ।
तुला – समय जोखिमपूर्ण कार्यमा रुचिप्रदायक रहला, तर सद्कार्यमा लाग्दा नै शुभ रहला । अरुको भर नपर्नुहोला । ठगी विश्वासघातदेखि सचेत रहनुपर्नेछ । जोखिम बढ्न सक्छ । आरोग्यतामा ध्यान दिनुपर्नेछ । विवादमा नपर्नु हितकर रहला ।
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१२ साउन २०७८ मंगलबार, २७ जुलाई २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वर्षाऋतु वि.सं. २०७८ श्रावण १२ गते
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (११ साउन २०७८ सोमबार, २६ जुलाई २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्री सूर्योत्तरायणे श्रीशाके १९४३ नेपाल सं. ११४१ वर्षा ऋतु राक्षसनामक सम्वत्सर
आजको पञ्चाङ्ग एवम् राशिफल (१० साउन २०७८ आइतबार, २५ जुलाई २०२१)
■ अनन्तश्री राजगुरु जगतगुरु वीरेन्द्र परम्हंश ज्योतिषाचार्य आजको पञ्चाङ्ग श्रीशाके १९४३ ग्रीष्म ऋतु राक्षस नामक संवत्सर नेपाल सं. ११४१ वि.सं.